Nkuzi 3 sitere na ụlọ ọrụ ndị ahịa etiti-ahịa | Martech Zone
Ịnakọta nzaghachi ndị ahịa bụ nzọụkwụ mbụ doro anya n'inye ahụmịhe ndị ahịa kacha mma. Mana ọ bụ naanị nzọụkwụ mbụ. Enweghị ihe ọ bụla a ga -emezu ma ọ bụrụ na nzaghachi ahụ emee ụdị omume. Ọtụtụ mgbe a na -anakọta nzaghachi, achịkọta n'ime nchekwa data nke nzaghachi, nyochaa ka oge na -aga, ewepụta akụkọ, ma emesịa mee ngosi na -atụ aro mgbanwe.
Ka ọ na -erule mgbe ahụ ndị ahịa nyere nzaghachi ekpebisiela ike na ọ nweghị ihe a na -eme na ntinye ha na ha nwere ike gafere na onye na -ere ahịa ọzọ. N'ezie òtù ndị ahịa na-eme ka ndị ahịa mata na ndị ahịa bụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ha enweghị mmasị ka a na-emeso ha dị ka akụkụ nke mkpokọta. Ndị ahịa kwesịrị ịdị ka ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ bụghị nọmba. Maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, nke ahụ bụ ihe kacha mkpa, dị ka ndepụta Forbes gosipụtara kwa afọ Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ahịa-etiti. ụlọ ọrụ.
Companieslọ ọrụ ndị ahịa lekwasịrị anya lekwasịrị anya na ndị ahịa ha. Kama ịbụ ndị ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ego ha na -enweta chụpụrụ, ụlọ ọrụ ndị a na -etinye ndị ahịa n'etiti mkpebi ọ bụla ha na -eme. Ha na-elekwasị anya na ndị ahịa karịa itinye uche na ngwaahịa. Ebe etiti ahụ pụtara ìhè na nnukwu ọrụ yana ahụmịhe ndị ahịa na -emekọ ihe ọnụ.
Blake Morgan, onye nkwado Forbes
N'ịtụle ihe na-eme ka ụlọ ọrụ ndị a nwee ihe ịga nke ọma n'ịbụ ndị ahịa, ihe ole na ole na-apụta ìhè. Ilele usoro ndị a nwere ike ịba uru n'inyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka ime ka mmekọrịta ndị ahịa ha sikwuo ike.
Ọmụmụ 1: Nweta ndị ọrụ nọ n'ụgbọ
Companylọ ọrụ na -ahụ maka ego USAA, nke bụ #2 na ndepụta Forbes maka 2019, na -agba ndị ọrụ ume ka ha mụta gbasara ndị ahịa ka ha nwee ike ịnye ndụmọdụ kacha mma yana ndụmọdụ ngwaahịa. A na -akwụ ya ụgwọ maka USAA Ntụle Ọkwá Ngwá Ọrụ (NPS) bụ okpukpu anọ nkezi akara ụlọ akụ. USAA na -enyere ndị ọrụ aka ịghọta echiche ndị ahịa, dị ka akụkọ si kwuo Otu USAA si eme ahụmịhe ndị ahịa n'ime ihe ọhụrụ n'ime omenala ụlọ ọrụ ya. Enyemaka a gụnyere:
Na -enye ụlọ nnweta nnweta, ebe ndị ọrụ nwere ike ịtụle ka ọrụ ga -esi dị mkpa ka emegharịa maka ndị nwere nkwarụ. Were nyocha nyocha, dịka ọmụmaatụ. N'ime ụlọ nnweta, ndị ọrụ USAA mepụtara teknụzụ njide ihe dịpụrụ adịpụ nke nwere ike mee ka ndị nwere anya anya nwee ike ịnụ ihe dị na nlele ka ekwentị ha na-enyocha ya.
Ọzụzụ ndị ọrụ n'oge ịbanye n'ụgbọ agha ebe ndị ahịa USAA bụ ndị agha na ezinụlọ ha. Ọzụzụ a gụnyere ịkwadebe na rie MRE (nri, dị njikere iri nri) na iji sajenti lara ezumike nka na-egwu ala. Akwụkwọ akụkọ ndị ọrụ na -enye mmelite na ndụ ndị agha.
Ndị ọrụ na -enwekwa ike ịkekọrịta echiche ha ka esi eme ka ahụmịhe ndị ahịa ka mma. Kwa afọ, ndị ọrụ na -edobe ihe dị ka puku echiche iri; Echiche 10,000 enyerela ikike ịnata akwụkwọ ikike US, dị ka akụkọ gbasara omenala ndị ahịa USAA si kwuo. N'oge Hurricane Harvey na 897, nkwado ụlọ ọrụ ahụ maka imepụta ndị ọrụ rụpụtara mmepe nke ọnụ ụzọ ntanetị na foto tupu na mgbe ikuku ka ndị otu USAA wee nwee ike lelee mmebi ụlọ ha tupu ha ahụ ya n'onwe ya.
Iji nabata ịdị n'otu nke ndị ahịa n'ezie, onye isi ala, ndị isi ọrụ na ndị otu ahịa ga-ekwenye ilekwasị anya n'ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa. Onye isi ahịa azụmaahịa na ndị isi ndị ọzọ nwere ike gbaa ndị ọzọ nọ na nzukọ ume site n'ịkwado ịdị n'etiti ndị ahịa dị ka iwu na imepe mmemme ndị ọrụ iji kwado ya.
Na mgbakwunye, ana m akwado ịhọrọ onye ọrụ nke nwere ike rụọ ọrụ dị ka onye ahịa ndị ahịa nke ụlọ ọrụ gị. Onye a ekwesighi ịbụ onye isi ọrụ mana ọ ga -abụrịrị onye nwere ikike imetụta ndị ọzọ ma mee ka ha zaa ajụjụ. Ha kwesịkwara inwe agụụ ime ihe dịka onye mmeri nke etiti ndị ahịa ma gbaa mbọ kwado ebumnuche ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọmụmụ 2: Hazie Ọrụ Ndị Ahịa
N’afọ 2019, Hilton nwetara otu Ndepụta Afọ Ojuju Ndị Ahịa America (ACSI) nke 80, nke bụ akara kachasị elu na otu nke naanị otu onye na -ere ahịa na -ekerịta. Ọ bụ ezie na ọ bụ akara dị egwu, Hilton na -ahọrọ imeso ndị ahịa ihe n'otu n'otu kama ịbụ naanị ọnụọgụ mkpokọta.
Otu ihe atụ nke a bụ ụlọ ejikọtara Hilton, nke na -enyere ndị otu Hilton Honors aka ịkwasa ntụrụndụ kachasị amasị ha, setịpụ mmasị ha maka ọwa TV na okpomọkụ ụlọ, ma chịkwaa TV, ọkụ, na ihe na -enye ọkụ site na ngwa ha na -ebudata na ngwaọrụ mkpanaka ha, dị ka broshuọ dị na Hilton Connected Room.
Ndị ọbịa nwere ikike yiri nke ahụ ha nwere n'ụlọ, ọ na -eme maka ahụmịhe enweghị nkebi. Nke a na -enye anyị nnukwu uru karịa ndị asọmpi anyị n'ahịa.
Onye isi njikwa nke Canopy nke Hilton dere
Ịhazi ọrụ ndị ahịa nkeonwe chọrọ nghọta siri ike maka mkpa onye ahịa na ihe ndị ọ chọrọ. Ezi ụzọ iji gbanye onye ahịa ahụ n'echiche kwa ụbọchị bụ ịmalite iso ndị ahịa na -azụ ahịa nzukọ n'elu atụmatụ. Ndị ọrụ nwere ike ime nke a site na:
Ịkekọrịta ihe ha mụtara na mkparịta ụka ha na onye ahịa na nso nso a
Inwe onye nwere onye na -agwa ndị ahịa okwu ma ọ bụ nkwado ịkekọrịta ihe ọhụrụ ha mụtara gbasara onye ahịa
Na -agbazinye usoro Amazon nke ịjụ ajụjụ ndị a gbasara echiche ọhụrụ: Ole ndị ka echiche a metụtara? Gịnị mere echiche a ga -eji atọ ha ụtọ? Na -enyocha metric ọhụrụ ma ọ bụ emelitere na ndị ahịa, dị ka NPS
Ọmụmụ nke 3: Mee ihe na nzaghachi ndị ahịa
ụbọchị ọrụ, njikwa ego na onye na -ere ngwanrọ njikwa ego mmadụ, nwere akara afọ ojuju ndị ahịa 98% wee gosipụta ya na mmemme ịga nke ọma ndị ahịa ya. adịghị edozi maka mmekọrịta 'nkezi', dị ka blọọgụ ụbọchị ọrụ Ihe ịga nke ọma ndị ahịa pụtara na nkezi adịchaghị mma. Ụlọ ọrụ ahụ na -agba ndị ahịa ume ka ha nyere aka metụta mmepe ngwaahịa site n'ịghọ onye nkuchi n'oge ma ọ bụ nwalee mwepụta ọhụrụ tupu ha adị ebe niile.
Anyị kwenyere na ndị ahịa na -enwe afọ ojuju karịa mgbe ha nwere ike inye onyinye, anyị na -adịkwa irè karị mgbe anyị nwere ike wepụta atụmatụ ọhụrụ, ndozi na ike dabere na nzaghachi gị.
Onye isi ndị ahịa Emily McEvilly
Ọ bụ ezie na nzaghachi ndị ahịa ọhụrụ bụ isiokwu dị mma maka nzukọ, nke ahụ ekwesịghị ịbụ oge mbụ a na -atụle nzaghachi. Iwu ziri ezi bụ izizi zaghachi okwu onye ahịa site n'ikenye ya onye ọrụ ka ọ dozie - n'ime awa 24 ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume - wee kesaa nzaghachi nye onye ọ bụla nọ na nzukọ. Nzaghachi ndị ahịa kwesịrị ịbụ nke doro anya na ịnweta. Ekwesịrị ịkekọrịta ozi ọma na akụkọ ọjọọ niile.
Ka emechara okwu a, ị kwesịrị inyocha nzaghachi ka ị hụ ka o siri wee kwurita otu esi egbochi ụdị okwu ahụ ime n'ọdịnihu. Nke a ga -eme ka ndị ahịa gị nwekwuo nghọta ma mepụta ntụkwasị obi karịa n'aka ndị ahịa.
Mee Nzọụkwụ n'Ebe Onye Ahịa nọ
Ịbụ nzukọ na-elebara ndị ahịa anya na-achọ ka onye ọ bụla banye n'ụgbọ site n'elu-elu, imepụta ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche, na ịnakọta na ịzaghachi nzaghachi ndị ahịa. Soro ihe nlereanya nke ụlọ ọrụ ndị a na-elebara ndị ahịa anya na ndị otu azụmaahịa na nzukọ gị ga-abịaru nso na onye ahịa gị ma nwekwuo ohere ịnweta na idebe ọtụtụ n'ime ha.
Gaa Alchemer maka ozi ndị ọzọ
Tags: alchemerBlake ndụahịa centricnzaghachi ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaịhazi ọrụ ndị ahịaahịa-centricọzụzụ ndị ọrụForbesHiltonỤlọ njikọ Hiltonnet nkwalite akarankpkeonweụbọchị ọrụ